रातो ब्ल्याङ्केट | रेजिना गौतम
कथा रेजिना गौतम August 31, 2020, 9:08 pm
एउटा खाली ड्रम जहाँ पानी भर्न थालेको निरन्तर चार घण्टा भयो, कहिले भरिंदैन । पानी जति हालेपनि त्यति नै बस्छ । उँभो कहिले आउँदैन् । पाँच दिन भयो यो क्रम निरन्तर दोहोर्याइरहेछु । पानी भर्ने म सहित ६ जना छौं । दुईजना बराबर १०० लिटरको ड्रम छ । ३ ठाउँमा राखिएका छन् ड्रम । ड्रम नभरिने सबैको पीडा एउटै थियो । जिउ गलेर लखतरान भयो । तर, कहिले भरिन्न । आश्रमभित्रकी एकजना दिदीलाई सोधें । खोजी गर उहाँले भन्नुभयो । आश्रममा भएमध्ये उमेरले म सबैभन्दा सानी थिएँ । धेरै नबोल्ने, सिकाएको कुरा ध्यान दिएर सुन्थे । त्यसैले होला मैले सबैको माया पनि पाएकी थिए । भोलिपल्ट पनि ड्रममा पानी हाल्यौं तर भरिएन् । विगतकै पीडाले लखतरान भएपछि खोजी गर्न थालें आखिर के छ यस्तो ? न त पानी नै बाहिर गएको देखिन्छ, न त ड्रम नै भरिन्छ ! मलाई पत्ता लगाउन दुईदिन लाग्यो । तब त्यहाँबाट त्यो काम कहिले भर्नुपरेन । अनौठा काम लगाएर दिमाग माझ्ने काम रहेछ । समय वित्तै जाँदा आश्रममा म एक विश्वास र सक्तक्त सदस्यका रुपमा दरिंदै गएँ । बाल्यकालदेखि भोगेका यथार्थहरुले धेरै पाठ सिकाईसकेका छन् । मेरो मन मैले भोगेका व्यथाहरुले भोग्न नपरोस् भन्नेमा तल्लिन छ । असहाय,बेवारिसे सडक महिला उद्दार आश्रमको नाम संशोधन गरी ‘असहाय,बेवारिसे सडक महिला उद्दार तथा व्यवस्थापन संस्था’नामाकरण गरियो । विगत ७ वर्षदेखि यो संस्थाको पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ । उद्दार गरेर पुर्नस्थापना हुन नसकेका महिलाहरु आय आर्जनको काममा लागेका छन् । सीपलाई सिर्जनामा बदल्नेहरुले त्यही बसेर आम्दानी पनि गर्छन् । उद्दार गरिएका महिलाहरुले सिर्जना गरेका कुशन, टोपी, गुडियाहरु देश–विदेशसम्म पुगेका छन् । जुन उनीहरु र संस्था दुवैका लागि सुखद पक्ष हो ।